Nahoana no Dennis Rodman namana Kim Jong-un. Izao Tontolo Izao Vaovao Maneho Ny
Ny teo aloha-ny kintan’ny NBA nilaza fa izy no nitsidika Pyongyang toy ny tsy miankina ny olom-pirenena, nefa dia nandray tao amin’ny seranam-piaramanidina roa korea Avaratra manam-pahefana. Andriamatoa Rodman nilaza fa ny tanjona amin izany dia nankany ‘ny tena mba hijery raha toa aho afaka foana ny fitondrana ny fanatanjahan-tena any Korea Avaratra. Izy teo aloha dia nanao fara-fahakeliny dimy fitsangatsanganana any Pyongyang, ary efa voalaza Kim toy ny mahatahotra ankizy sy ny tsy hoe ratsy. Andriamatoa Rodman ny fitsidihana tonga taorian’ny Korea Avaratra notsapaina ny maro ny balafomanga ny fikasany dia ny fampivelarana ny ara-nokleary-tipped balafomanga afaka mikapoka ny ANTSIKA. Ny disadisa eo Kim sy ANTSIKA ny Filoha Donald Trump dia amin’ny tazo dity ny fiara, amin’ny Trompetra mandrahona fa ny firotsahana ara-tafika dia mety.
Andriamatoa Rodman lasa zaza ratsy laza any s, matetika nifanandrina tamin’ny mpilalao sy ny manam-pahefana nandritra ny lalao. Izy efa nomenaina ny volo ny andian-audacious loko, nahazo ny isa ny tombokavatsa sy ny piercings, ary vetivety manambady modely Carmen Electra. Andriamatoa Rodman lasa namany Kim mandritry ny fivoahany voalohany any amin’ny Korea Avaratra any, rehefa izy malaza nihira Happy Birthday ho tsy refesi-mandidy ity. Ny dimy andro NBA tompon-daka voalohany nandeha ny mpitoka-monina irery fanjakana ny miaramila basketball fampirantiana, ary ny travel antoko voalaza ho lasa voalohany ny Amerikana mba hihaona Kim. Izy namariparitra ny mpanao didy jadona toy ny namana amin’ny fiainana ary na dia nandrisika ny teo aloha ny Filoha Barack Obama mba haka ny antso an-tariby sy Kim, ny mpiara-basketball mpankafy. Andriamatoa Rodman tao amin’ny olo-Malaza Niofana rehefa izany dia nampiantrano ny Donald Trump sy nanohana ny Repoblika nandritra ny fifaninanana ho filoham-pirenena. Rehefa nanontany amin’izao fotoana izao raha izy no efa niteny Atoa Trompetra mialoha ny diany farany, Andriamatoa Rodman hoe: ‘izaho no tsara tarehy be azo antoka fa izy dia faly amin’ny zava-misy aho fa ny eto miezaka mba hanatanterahana zavatra iray isika, na mila. ‘Atoa Trump dia efa nisioka teo aloha hoe: Ny hany Amerikana, izay efa nihaona tamin’ny koreana Tavaratra olona zaza Dennis Rodman.
Dia t fa mampatahotra sy ny malahelo
Tamin’ny volana aprily ny Filoha nilaza fa izy dia ho vonona ny hitsena ny didy jadona koreana Tavaratra eo ambany ny tsara ny toe-javatra. Korea avaratra dia amin’izao fotoana izao ny fitazonana efatra Amerikana amin’ny asa toby — ny zavatra Atoa Rodman efa niteny momba ny lasa. Andriamatoa Rodman nandrisika Kim mba hanafaka Kenneth Bae, izay efa voasazy nandritra ny taona mafy ny momba izany, nefa ihany koa dia nilaza Andriamatoa Bae-tsiny noho ny fampidirana am-ponja. Andriamatoa Bae, izay teraka tao Korea Atsimo, notànana any ho ‘fahavalo dia miasa manohitra ny repoblika’ ary tamin’ny volana aprily higadra taona asa an-terivozona
← Fampidirana ny Koreana: koreana ankizivavy Sofie Korea
Andriakaky ô Roulette - maimaim-Poana amin'ny Chat miaraka amin'ny andriakaky ô, ary maimaim-Poana ny Andriamanitra Webcam →